केंटकी WIC | जेपीएमए, इंक
ईबीटी प्रश्नहरू र जवाफहरू
मैले कसरी ईविआई कार्डको साथ आफ्नो फाइदा प्राप्त गर्न सक्छु?
क्लिनिक कर्मचारीले तपाइँको खाद्य वस्तुहरू पहिले नै जारी गर्नेछ। प्रत्येक महिनाको लागि तपाईंको फाइदा सुरुवात मितिमा तपाईंको खातामा हुनेछ। जब तपाईं आफ्नो अनुमोदित फूडहरू खरिद गर्नुहुनेछ, तपाईंको खाता ब्यालेन्स घटाउनेछ।
मलाई मेरो फाइदा कहिले हुनेछ?
लाभहरू तपाईंको ई.एन.टी. खातामा 12 मा हुनेछ: 00 आइतबार सुरूवात मितिमा र 12 मा समाप्त हुने मिति समाप्त हुनेछ: समाप्त मिति मा।
PIN के हो (व्यक्तिगत पहिचान नम्बर)?
PIN एक चार अंकको गुप्त नम्बर हो जसले केवल तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी कार्ड प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंको PIN लाई कसैले तपाईंको कार्ड प्रयोग गर्न अधिकृत छैन भनेर कसैलाई नबोध्नुहोस्। यदि कसैले तपाईंको पिन जान्दछ र उनीहरूले तपाईंको अनुमति बिना तपाईंको फायदा प्राप्त गर्न तपाईँको कार्ड प्रयोग गर्दछ, ती लाभहरू प्रतिस्थापन गर्दैनन्। तपाईं पनि आफ्नो कार्ड वा कुनै ठाउँ यो जहाँ तपाइँको बटुआ वा पर्स पाउन सक्दछन् आफ्नो PIN मा लेख्नु हुँदैन।
के भयो भने म मेरो पिन बिर्सन्छु?
यदि तपाईंले आफ्नो PIN बिर्सनुभयो भने, तपाइँको WIC क्लिनिकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। जब तपाइँ एक पिन रोज्नुभयो भने, तपाईंले याद गर्न सजिलो चार अंकहरू छान्नु पर्दछ, तर कसैको लागि कडा मेहनत गर्नु पर्छ (उदाहरणका लागि, तपाईंको बच्चाको वा अभिभावकको जन्मदिन)।
के भयो भने म गलत पिन प्रविष्ट गर्दछु?
यदि तपाईंलाई आफ्नो PIN सम्झँदा समस्या भएको छ भने, POS टर्मिनलमा प्रविष्ट गर्दा तपाईंको पिन अनुमान लगाउन प्रयास नगर्नुहोस्। यदि तपाईले 4th प्रयास गरेर सही PIN प्रविष्टि गर्नुभएको छैन भने, तपाइँको खाता तपाईंको पिन अनुमानित र तपाईंको फाइदा प्रयोग गरी कसैको रक्षा गर्न लक गरिनेछ। पुनः प्रयास गर्न अनलक गर्नको लागि तपाईंले खाताको लागि आधी रात पछि सम्म पर्खनुपर्छ।
यदि कसैले मेरो पिन फेला पार्छ भने के गर्नु पर्छ?
यदि कसैले तपाइँको PIN सँग राख्नु हुँदैन भने, तपाईंको PIN परिवर्तन गर्नको लागि तुरुन्तै तपाइँको WIC क्लिनिकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
म कसरी मेरो खाना खाता ब्यालेन्स थाहा पाउनेछु?
तपाईंको खाता ब्यालेन्स जान्न को लागि सबै भन्दा आसान तरीका तपाईंको रसीदहरु को राख्न छ। यदि तपाईंसँग आफ्नो अन्तिम रसीद छैन भने, तपाईं आफ्नो ब्यालेन्स क्लिनिक वा पसलमा EBT कार्ड रिडरमा जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले सँधै खरिद गर्नुभन्दा पहिले अनुमोदित फूडहरूको रकम जाँच गर्नुपर्छ।
यदि POS मिसिन काम गरिरहेको छैन भने के हुन्छ?
अर्को POS मिसिनलाई प्रयास गर्नुपर्छ वा तपाईं अर्को सहभागी भण्डारमा जान सक्नुहुन्छ।
के भयो भने मेरो कार्डले काम गर्दैन?
तपाईंको WIC क्लिनिकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईंले प्रतिस्थापन कार्ड प्राप्त गर्नु पर्दछ।
मैले मेरो कार्ड गुमाए भने के गर्नु पर्छ?
यदि तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी कार्ड गुमाएको वा चोरी भएको छ भने, तपाईंको WIC क्लिनिकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र तिनीहरूले प्रतिस्थापन कार्ड जारी गर्नेछन्।
मेरो फाइदा प्रयोग गरिसके पछि मैले मेरो कार्डसँग के गर्नुपर्छ?
तपाईंको ईवाइसी कार्ड बचत गर्नुहोस्! तपाईंको WIC फूडहरू प्रयोग गर्दा समेत, तपाईंको eWIC कार्ड पुन: प्रयत्न हुन्छ। तपाईंको अर्को फाइदाहरू तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी कार्डमा पहुँच गरिनेछ।
तपाईंको EBT कार्ड प्रयोग गर्दै
1। तपाईंको खाता ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस्
यदि त्यहाँ EBT कार्ड रिडर हो भने, खरिद गर्नु अघि तपाइँको ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस्। आफ्नो ब्यालेन्स स्लाइड गर्नुहोस् र आफ्नो ब्यालेन्स प्राप्त गर्न आफ्नो पिन प्रविष्ट गर्नुहोस्।
2। तपाईंको WIC फूड्सको लागि पसल
तपाईंलाई के चाहिन्छ भनेर खरिद गर्नुहोस्। तपाईं एकै समयमा आफ्नो सबै खाद्य किन्न छैन।
यदि तपाईंको फाइदाहरू सुखाने वा सेम / मटरहरू समावेश छन् भने, तपाईं या त 16 औंस थैला वा डिब्बाबंद बीन्स / मटरको 4-16 औंस डिब्बे खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। सबै4डिब्बे एक पटकमा खरिद गर्न सकिने छैन, तर एक पटक जब तपाईं डिब्बे खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, त्यस मात्राको लागि तपाइँको शेष रकम शेषको ब्यालेन्सको त्यो भागबाट सूखे सेन्स खरिद गर्न सकिँदैन।
तपाईंको WIC EBT कार्ड तयार छ।
कुनै पनि खानाको स्क्यानिङ भन्दा अघि, स्टोर क्यान्डियर भन्नुहोस् जुन तपाई WIC EBT कार्ड प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
जब कैशियरले तपाईंलाई बताउँछ, तपाइँको कार्ड WIC EBT कार्ड रीडरमा स्लाइड गर्नुहोस् वा तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी कार्ड क्यासिफ्रेटमा हाल्छ।
आफ्नो पिन प्रविष्ट गर्नुहोस् र कीप्याडमा प्रविष्ट बटन थिच्नुहोस्।
कैशियरले तपाईंको खाना स्क्यान गर्नेछ।
खाद्य वस्तुहरू र ताजा फलहरु र सब्जिहरु को डलर मूल्य तपाईको खरीदबाट कटौती गरिनेछ। तपाईंको स्वीकृत खाद्य खरिदको मात्र सटीक राशि तपाईंको WIC खाता खाताबाट कटौती गरिएको छ।
क्लर्कले तपाईंलाई रसीद दिनेछ। यो रसीदले तपाईंको खातामा अझै पनि WIC फूडहरूको मात्रा र मात्राहरू (यदि कुनै पनि) देखाउनेछ।
4। तपाईंको कार्ड राख्नुहोस्
तपाईंको कार्ड पुन: प्रयोग योग्य छ।
तपाईंको सबै खानाहरू चलेको बेला पनि, तपाईंको कार्ड टाढा नदिनुहोस्।
तपाईंको कार्ड सुरक्षित र सफा राख्नुहोस्।
तपाइँको कार्ड मोड नगर्नुहोस्।
तपाईंको कार्ड म्याग्नेट र इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूबाट टाढा राख्नुहोस्, जस्तै टिभि, रेडियो, वीसीआर, माइक्रो माइक्रोभाइभ, सेल फोन, आदि।
तपाईंको कार्ड प्रत्यक्ष सिडलाइटमा राख्नुहोस् जस्तै तपाईंको कार ड्याशबोर्डमा।
आफ्नो स्थानीय WIC साइट वा केन्की WIC सहायता डेस्क संग सम्पर्क गर्नुहोस् 1-877-597-0367 विकल्पहरूसँग एक प्रश्न।
WICShopper अनुप्रयोगको साथ समर्थनको लागि ईमेल wicshopper.support@jpma.com.
WIC प्राधिकृत खाद्य सूची
अंग्रेजीमा खाद्य सूची हेर्नुहोस्
यस भाषा को Español मा